Xildhibaan Cabditaax Qaasim “Colaadda iyo mucaaradnimada Wasiir Goodax yeysan mugid gelin mustaqbalka Ardayda Soomaaliyeed” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabditaax Qaasim “Colaadda iyo mucaaradnimada Wasiir Goodax yeysan mugid gelin mustaqbalka Ardayda Soomaaliyeed”
Cabdifitaax Qaasim oo katirsan xubnaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay imtixaanka Qaranka oo ay qaadeysa Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya iyo doodo wali arintaasi ka taagan.
Xildhibaan Cafitaax ayaa sheegay in uu jiro kala aragti duwanaansho u dhaxeeya bulshada Soomaaliyeed oo ku saabsan imtixaanka Qaranka kuwaas oo aad u dhaliilaya Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre.
“Kala arag duwanaanshaha siyaasadeed iyo mucaaradnimada Wasiirka waxbarashada yaan lagu dabaqin mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
“Waxaan arkay dad ay ku jiraan aqoonyahaano o faafinaya wax lagu sheegay qish imtixaan,iyaga oo ka qeyb qaadanaya sumcad dilka magaca Soomaaliyeed” ayuu yiri Cabdifitaax Qaasim oo qoraal soo dhigay bogga facebook ee internet-ka ku leeyahay.
Cabdifitaax Qaasim ayaa ka digay in la qalqal geliyo Mustaqbalka ardayda Soomaaliyeed waxa uuna dhamaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aqoonyahanka ah ay ka fiirsadaan qoraalada ay soo dhigayaan.
“Waa wax xanuun badan inaan aragno aqoon yahan sita PhD,Master degree,Bachelor, haddana qayb ka ah sumcad dilka magaca soomaaliyeed,faafinaayana wax lagu sheegay qish imtixaan taasoo keentay durbaba in dowlad yiraahdaan shahaaddooyinka waa Below Standard” ayuu yiri Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook.
Waxaa uu ku dardaarmay in waxyaabahaas oo dhan laga gudbo,isla markaana ubadka Soomaaliyeed la baro xarumaha Madaxtooyada,Barlamaanka,Wasaaradaha iyo dhamaan Goobaha danta guud lagu dhisay iyagana ay leeyihiin Madaxduna yihiin Adeegayaal maanta jooga berina tagaya sida uu hadalka u dhigay Cabdifitaax Qaasim oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Mahad Salaad oo talaabo sharci-daro ah ku tilmaamay xariga saxafi Cali Aadan Muumin
Guddiga Arimaha Bulshada ee Golaha Shacabka oo Ardayda imtixaanka galaysa u ballan qaaday waxbarasho dibadda ah